चितवन निकुञ्ज घुम्ने ७२ सालमा ७५ हजार – Saurahaonline.com
चितवन निकुञ्ज घुम्ने ७२ सालमा ७५ हजार
सौराहा अनलाइन | २०७३, १० बैशाख शुक्रबार
चितवन, १० बैशाख । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको असहज अवस्थाका साथ बितेको विसं. २०७२ सालमा चितवन निकुञ्ज घुम्ने कुल पर्यटकको संख्या ७५ हजार ३० रहेको छ । निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकहरु सामान्य अवस्थामा महिनामा न्यूनतम १० हजारदेखि अधिकतम २५ हजारसम्म हुन्थे । तर ७२ सालमा वैशाख महिनाबाहेक चैत महिनामा मात्रै पर्यटकको संख्या १० हजार नाघ्यो ।
चितवन निकुञ्जले दिएको विवरणअनुसार ७२ सालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक चैत महिनामा आएका छन् । गएको चैत महिनामा चितवन निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकहरु १२ हजार १४७ जना रहेको निकुञ्जले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । यसअघि अघिल्लो वर्षको वैशाखमा कुल १० हजार ५३० जनाले चितवन निकुञ्ज घुमेका थिए । जेठमा यो संख्या एक हजार ५९२ मात्रै थियो ।
सामान्य अवस्था रहेका बेलामा विसं. २०७१ सालको कात्तिक एकै महिनामा निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकहरु २५ हजार ७८१ थियो । ७१ सालको कुल १२ महिना अर्थात् वैशाखदेखि चैतसम्म चितवन निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकहरु अत्याधिक थिए । चितवन निकुञ्जको विवरणहरुलाई आधार मान्दा ७१ सालमा निकुञ्ज घुम्ने पर्यटक संख्या दुई लाख चार हजार ५२८ थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष जम्मा ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पर्यटकहरुले चितवन निकुञ्ज घुमेका छन् । ७१ सालमा निकै फष्टाएको पर्यटक संख्या ७२ सालको सुरुमै आएको बिनासकारी भूकम्पपछि ह्वात्तै घटेको हो । भूकम्पपछि पर्यटक संख्या विस्तारै सुधार हुने आशामा संविधान जारी भएसँगै असोजबाट सुरु भएको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले तुषरापात ग¥यो ।
चितवन निकुञ्ज घुम्न आउनेहरु सौराहामा बढी पुग्ने गर्छन् । सौराहा डेढ सयको हाराहारीमा पर्यटकीय होटलहरु रहेका छन् । पर्यटक संख्यामा भएको कमीले होटल व्यवसायसमेत संकटमा परेको व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । पोखरामा पर्यटन संकटमा परेपछि त्यसलाई उकास्न अनेक खालका क्रियाकलाप भए पनि चितवनमा त्यस्ता कार्यक्रमहरुको अभाव देखिन्छ ।
काठमाडौं र पोखरापछि चितवन देशको तेस्रो मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हो । चितवन निकुञ्जमा रहेका दुर्लभ जंगली जनावरहरु एक सिंगे गैंडा, पाटे बाघलगायतका जनावरहरु,चरा र वनस्पति हेर्न देश विदेशबाट पर्यटकहरु यहाँ आउँछन् । निकुञ्ज आसपासमा बस्ने थारु, दराई, बोटे, कुमालजस्ता जिल्लाका आदिवासी समुदायको संस्कार संस्कृतिप्रति पनि पर्यटकहरुको रुची रहने गरेको छ ।
महिना ७१साल ७२ साल
बैशाख १६,९७५ १०,५३०
जेठ १२,६६१ १,५९२
असार १०,३५१ १,५९४
साउन १६,७२७ २,६९०
भदौ १०,६६५ २,१७९
असोज २०,९५७ ४,५०६
कात्तिक २५,७८१ ८,७५३
मंसिर १७,०७० ६,१६७
पुस १६,७१२ ८,०२२
माघ १४,६९८ ८,००३
फागुन २०,४४५ ८,८३३
चैत्र २१,४८६ १२,१४७
तथ्याङ्क स्रोत : चितवन निकुञ्ज मुख्यालय, कसरा ।